#Culture Program #Burmese Breakfast & How to shop like local
#English Description Below
✔Anyreview အဖွဲ့ သားတွေ ဒီအပါတ်မှာ တော့ "မ ရီဟားနား" နဲ့အတူ မြန်မာ နံနက်စာ စားပြီး ဈေးသွား ခဲ့တဲ့ အစီအစဉ်လေး တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ နောက် သောကြာနေ့ မှာ ဟင်းချက်တဲ့ အစီအစဉ် တွေ လေးရှိတဲ့ အတွတ်🌐 ဒီပေ့လေးကို like & see first လုပ်ထားဖို့ မမေ့နဲ့ ဦးနော်။ ဒီအစီအစဉ်လေးရဲ့ရည်ရွယ် ချက်ကတော့ မြန်မာ လူမျိုး တွေ နေ့ စဉ် လုပ်လေ့ လုပ်ထ ရှိတဲ့ ဓလေ့ ထုံးစံလေးေ တွ ပြန်လည် ဖော်ထုတ် အမှတ်ရ စေဖို့နဲ့နားလည် သိရှိနုိုင်အောင် လို့ ဘဲဖြစ် ပါတယ်။
✔နောက် Episode တွေမှာ ဘာ တွေ ဆက် လက်ဖော်ပြလေးမလဲဆို တာ ကို ကြည့် ရှု စောင့် စား လိုက်ကြပါ စို့။ဒီအစီအစဉ်လေးဖြစ်မြောက်ရေးအတွတ် 🌐 www.groupbuyy.com.mm (AIT Co.,Ltd) မှ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီ ပံ့ ပိုး ပေးထားပါတယ်။
✔#For this very first Episode ,you are going to see How Burmese Breakfast are normally look like & what are the teashop culture .What is local market look alike & day to day activities of sellers and buyers at the market.
✔The aim of this program is to explore Burmese Culture & day to day life in Myanmar to understand culture & local people.There are many more exciting episode are coming on Friday,so stay tuned with us.Our Any Review Team thanks to 🌐 www.groupbuyy.com.mm (Daily Deals & discount Coupon website in Myanmar) who are helping & sponsored us to complete the program smoothly.
#More Episode are coming soon ! #Stay Tuned with us!
#Anyreview #Information for you!
✔(English Description Below )
🌞အားလုံး မင်္ဂလာပါ။ မနေ့ က ထုတ်လွင့်သွားတဲ့ #Culture Program ထဲက #Burmese Breakfast & How to shop like local video clip လေးကိုကြည့်ပြီးပြီ လို့ ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီနေ့ မှာ တော့ အဲ့ဒီ Program ရဲ့Behind the scenes လေး တွေနဲ့ရုိုက်ကူးရေးမှာ ဖြစ်ခဲ့ တဲ့အလွဲလေးတွေ ဆက်လက် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
🌞အသစ် အသစ်ထွက်ရှိလာမဲ့ Program အသစ်တွေ လက်မလွတ်တမ်းကြည့်လို့ ရအောင် ဒီပေ့ လေးကို Like & See first လုပ်ထားဖို့ တော့ လိုမယ်နော် အ မျိုးတို့။
🌞Original Clip လး မကြည့်ရသေးသူတွေအတွတ် အောက်ပါလင့်လေးက နေ တဆင့်ကြည့်လို့ ရတယ်နော်။
✔Hello Everyone ! Today our Any Review team going to present "Behind the scenes" of yesterday #Culture Program (Burmese Breakfast & How to shop like Local Episode 1)
🌞If you miss the original program ,you can watch on the following link
🌞Please like & see first our page not to miss upcoming new series of #Culture Program.
#Culture Program #How To wear "Hta Bi" #Anyreviewmyanmar.com
#မြန်မာ့ ထဘီ ဘယ်လို ၀တ် ကြမလဲ ?
✔Anyreview အဖွဲ့ သားတွေ ဒီအပါတ်မှာ တင်ဆက်ပေးမှာက တော့ "မ ရီဟားနား" မြန်မာ ထဘီ ဘယ် လို ၀တ်ရ တယ် ဆိုတာ ကို ပြော ပြပေးသွားမဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါအပြင် ယခု ခောတ် ထဘီ အမျိုးအစား ဘယ် နှ ခုရှိ လဲ ဘယ် လို တွေ ၀တ် မလဲ ဆိုတာ ကို ပါ တစ်ဆက်ထည်း ပြော သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
✔ပြီးခဲ့ တဲ့ ရက်တွေတုန်းက တော့ ဈေးသွားတဲ့ Episode လေးကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့ ဒီ ရက် လေး မှာ "How to wear Hta Bi" Episode လေးကြည့် လိုက်ကြရအောင် ။ နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ အစီအစဉ် တွေ လေးရှိတဲ့ အတွတ် 🌐 ဒီပေ့လေးကို like & see first လုပ်ထားဖို့ မမေ့နဲ့ ဦးနော်။
✔ဒီအစီအစဉ်လေးရဲ့ရည်ရွယ် ချက်ကတော့ မြန်မာ လူမျိုး တွေ နေ့ စဉ် လုပ်လေ့ လုပ်ထ ရှိတဲ့ ဓလေ့ ထုံးစံလေးေ တွ ပြန်လည် ဖော်ထုတ် အမှတ်ရ စေဖို့နဲ့နားလည် သိရှိနုိုင်အောင် လို့ ဘဲဖြစ် ပါတယ်။
✔နောက် Episode တွေမှာ ဘာ တွေ ဆက် လက်ဖော်ပြလေးမလဲဆို တာ ကို ကြည့် ရှု စောင့် စား လိုက်ကြပါ စို့။ဒီအစီအစဉ်လေးဖြစ်မြောက်ရေးအတွတ် 🌐 www.groupbuyy.com.mm (AIT Co.,Ltd) မှ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီ ပံ့ ပိုး ပေးထားပါတယ်။
ပထမဆုံး အပို်င်းဖြစ်တဲ့ " မြန်မာ နံနက် စာ နဲ့ဈေး ဘယ်လိုသွားကျ မလဲ "အစီအစဉ်ကို လွတ်သွားတဲ့ သူတွေအတွတ် အောက်ပါ လင့် လေးမှာ ကြည့်လို့၇တယ်နော်
✔#For this #Second Culture Episode ,you are about to see "How to wear Hta Bi" & how many types of "Hta Bi " and modern day "Hta Bi's Styles"
✔The aim of this program is to explore Burmese Culture & day to day life in Myanmar to understand culture & local people.There are many more exciting episode are coming on Every week,so stay tuned with us.Our Any Review Team thanks to 🌐www.groupbuyy.com.mm (Daily Deals & discount Coupon website in Myanmar) who are helping & sponsored us to complete the program smoothly.
Oh ! for those who miss the first episode can watch from this link
#AnyreviewsMyanmar #Information for you!